FAQs - Shanghai Langhai Printing Co., Ltd.
हामी तपाईका सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छौं।
हाम्रो सबैभन्दा धेरै सोधिने प्रश्नहरू।
हाम्रो FAQ मा भेला भयो। विशेष गरी तपाईको लागि।
तपाईंको उत्पादन दायरा के हो?
• हामी व्यावसायिक प्याकेजिङ उत्पादन प्रदायक हौं, विशेष गरी उपहार प्याकेजिङ क्षेत्रमा, हामी तपाईंलाई PVC झोला, टोट झोला, पेपर झोला, मुद्रण सेवा, अन्य सम्बन्धित प्याकेजिङ उत्पादनहरू र प्याकेजिङ सहायक उत्पादनहरू उपलब्ध गराउन सक्छौं।
• हामी एक-स्टप पेपर प्याकेजिङ सेवा प्रदान गर्दछौं, र तपाईंको आवश्यकता अनुसार अनुकूल डिजाइन स्वीकार गर्दछौं।
मूल्य कति हो?
मूल्य मात्रा, सामग्री, परिष्करण विधिहरू, आकार र अन्य कारकहरू द्वारा निर्णय गरिन्छ। यसबाहेक, हाम्रो निरन्तर टेक्नोलोजी नवाचारको कारण, हाम्रा केही उत्पादनहरूको धेरै प्रतिस्पर्धी मूल्य छ, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने हाम्रो बारेमा थप जान्न हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
के तपाइँ नमूनाहरू प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ र नमूना वितरण समय के हो?
• निश्चित रूपमा, सामान्यतया हामी नि: शुल्क नमूनाहरू प्रदान गर्नेछौं र तपाईंले भाडा लागत मात्र लिनु पर्छ। अनुकूलन मुद्रण नमूनाको लागि, त्यहाँ नमूना शुल्क आवश्यक हुनेछ।
• नमूना उत्पादन लगभग 3-7 दिन लाग्नेछ।
नेतृत्व समय के हो?
आदेश मात्रा र उत्पादन विवरण अनुसार लगभग7देखि 20 दिन।
के तपाइँ मेरो प्याकेजिङ्ग उत्पादनहरु को लागी नि: शुल्क डिजाइन प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ?
हो, हामी निःशुल्क डिजाइन सेवा, संरचनात्मक डिजाइन र सजिलो ग्राफिक डिजाइन प्रदान गर्दछौं।
MOQ 500pcs छ। यदि तपाईंको अर्डर कम छ भने 100pcs, कुल लागत समान हुनेछ।
अनुकूलन लोगो नमूना आदेश स्वागत छ। यो लगभग 40usd लागत, विभिन्न प्राविधिक र सामग्री मा निर्भर गर्दछ।
हामीले तपाईंको सन्दर्भको लागि हाम्रो नि: शुल्क स्टक जिप लक झोला पठाउन सक्छौं (तपाईले मुद्रण प्रभाव र झोलाको गुणस्तर जाँच गर्न सक्नुहुन्छ), यस तरिकामा, तपाईंले मात्र डेलिभरी शुल्क तिर्न आवश्यक छ। यो तपाईको लोगोको साथ नमूना प्रिन्ट अर्डर भन्दा सस्तो हुनेछ।
सामान्य उत्पादन नेतृत्व समय 9-10 कार्यदिवस छ। वितरण समय लगभग 5-7 काम दिन हो।
तपाईंले छाप्नको लागि कस्तो प्रकारको कागजात ढाँचा स्वीकार गर्नुहुन्छ?
AI, CDR, PDF, PSD, EPS, उच्च पिक्सेल JPG वा PNG। तपाइँको आवश्यकता को रूप मा अनुकूलन डिजाइन स्वीकार गर्नुहोस्।
कसरी सामान ढुवानी गर्ने?
• आफ्नो आवश्यकता अनुसार समुद्र वा हावा द्वारा।
• पूर्व-कार्य वा FOB, यदि तपाईंसँग चीनमा आफ्नै फर्वार्डर छ भने।
• CFR वा CIF, इत्यादि, यदि तपाईलाई हाम्रो लागि ढुवानी गर्न आवश्यक छ भने।
• DDP र DDU पनि उपलब्ध छन्।
• थप विकल्पहरू, हामी तपाईंको छनौटलाई विचार गर्नेछौं।
T/T, क्रेडिट कार्ड, PayPal, West Union, MoneyGram, L/C, Cash, आदि।
तपाईं निर्माता वा व्यापारी हुनुहुन्छ?
हामी चीन मा निर्माता हो र हाम्रो कारखाना शंघाई मा स्थित छ। हाम्रो कारखाना भ्रमण गर्न स्वागत छ!
यदि म सही उद्धरण प्राप्त गर्न चाहन्छु भने मैले कुन जानकारी प्रदान गर्नुपर्छ?
साइज, सामग्री, कागज मोटाई, मुद्रण विवरण, परिष्करण, प्रशोधन, मात्रा, ढुवानी गन्तव्य आदि।
तपाईं पनि हामीलाई आफ्नो आवश्यकता बताउन सक्नुहुन्छ, हामी तपाईंलाई उत्पादन सिफारिस गर्नेछौं।
अलिबाबा प्रणालीमा आधारित, हामी सामग्री, मोटाई, प्राविधिक र मात्रा जस्ता सबै उत्पादन विवरणहरू पुष्टि नगरेसम्म धेरै विशिष्ट मूल्य दिन सक्दैनौं। त्यसैले कृपया अर्डर गर्नु अघि हाम्रो बिक्रीसँग परामर्श गर्नुहोस्।
जब तपाइँ अर्डर गर्नुहुन्छ, कृपया हाम्रो बिक्रीमा AI वा PDF फाइलमा कलाकृति पठाउनुहोस्। कलाकृति पठाउन ढिलाइले डेलिभरीमा ढिलाइ हुनेछ। केही अवस्थामा, हामी साधारण डिजाइनको लागि सित्तैमा (अर्डर भुक्तानी सङ्कलन पछि) कलाकृति प्रदान गर्न सक्छौं। तपाईंले पुष्टि गर्नुभएको अन्तिम कलाकृतिको आधारमा कारखानाले बल्क उत्पादनको साथ अगाडि बढ्नेछ।
व्यापार आश्वासन अन्तर्गत अर्डरलाई खराब गुणस्तर र डेलिभरीमा ढिलाइ विरुद्ध अलिबाबा प्रणालीद्वारा सुरक्षित गरिनेछ। यो अत्यधिक प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ। यदि तपाईंलाई अर्डर गर्न आवश्यक छ भने, कृपया डेलिभरी जानकारी पठाउनुहोस्, त्यसपछि हामी भुक्तानी लिङ्क पठाउनेछौं। उहाँले अन्तिम कलाकृति तपाईंले पुष्टि गर्नुभयो।